Cilid ku timid adeega Zaad ee Telesom iyo Dad badan oo lacagtoodii waayey - Hablaha Media Network
Cilid ku timid adeega Zaad ee Telesom iyo Dad badan oo lacagtoodii waayey
HMN:- Xalay ilaa saaka waxa safaf loogu jiray xarumaha adeegga ZAAD-ka bixiya ee lacagaha mobile lagu shubto ee Shirkada Telesom oo dadka qaar ka cabanayaan lacagtii mobil-ka ugu jirtay oo ay ka waayeen qaybo ugu jirtay lacagtoodii.
Dad kala duwan oo aan la kulmay ayaa noo sheegay in lacagtii ay Mobilke ugu jirtay ee adeegga ZAAD-ka ka waayeen, hasse ahaatee markii ay shirkadda bixisa adeega ee Telesom u tageena ee ay waydiiyeen lacagtooddii ugu jawaabeen mas’uuliyiinta in ay cilad farsamo jirto oo lagu guddo jiro in ay farsamadeedii.
“Anigu waxaan waayey 32 dollar, markii aan shirkadda u tagayna waxay igu yiraahdeen systamkii hore ee laga guuray ayeey ku hartay ee waa la hagaajinayaa”ayuu yiri Fu’aad oo ka mid ahaa dadkii ka cabanayey in ay mobilkooda ka waayeen lacagtii ugu jirtay.
Guuleed Cumar oo ka mid ah isna dadka ka cabanaya lacagta uu ka waayey Mobileka ayaa yidhi “kun iyo afar boqol oo aan qof u dirayey ayaa qofkii kale gaadhin anigiina iga baxday, marka ilaa hadda ma garanayo wax aan sameeyo”
Boqolaal dadweyne ah ayeey arrintani saamaysay, taasina waxay keentay in dadka qaar walaac ka muujiyaan lacagta Mobileka ugu jirta oo qaarkood lacagtii ugu jirtay kala baxaan.
Adeega ZAAD-ka ee lacagta lagu kala dirsado ama lagu kaydsado ayaa dadweynuhu badankoodda aad u isticmaalaan, hasse ahaatee xalay iyo saaka ayaa dadweynaha jahawareer ka qaaday lacagtan ay moobiladda ugu jirtay ee ay waayeen.